‘सरकारले भ्रम फैलाइरहेको छ, कोरोनाप्रति आफैं सतर्क बनौं’ – Kite Sansar
यो पनि सत्य हो कि, सधैं लकडाउन सम्भव हुन्न । कोरोना संक्रमणको समाधान लकडाउन मात्र पनि होइन । लकडाउन खुकुलो बनाउनु आवश्यक थियो, खुकुलो भयो । त्यसैले अहिले सरकारले लकडाउन किन खुकुलो बनायो भन्ने विषयमा बहस गर्नुभन्दा यति लामो लकडाउनमा सरकारले के गर्‍यो ? र, अब ढुक्क हुँदा हुन्छ ? भनेर बहस छलफल गर्नु जरुरी हुन्छ ।संक्रमणको जोखिम हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुनेछ । त्यसैले सचेत भएर दैनिक जीवनमा फर्कनुपर्छ । अनि यो भुल्नु हुन्न कि अब झनै पहिलेभन्दा बढी सावधानी अपनाउनुपर्छ, लापरवाही गर्नै हुन्न ।
सरकारसँग लकडाउन खुकुलो नबनाउनुको विकल्प थिएन । लकडाउन खुकुलो बनाएपछि सरकार र नागरिक दुबैको जिम्मेवारी बढेको छ ।उपत्यका बाहिरबाट उत्तिकै मानिसहरु छिरेका छन् । यो बेला संक्रमणको सम्भावना झन् बढेको छ । सरकारले समुदायमा व्यापक परीक्षण गरेर मात्र यो निर्णय गर्नुपर्थ्यो ।
नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४१ पुग्यो बीपीमा महोत्तरीका पुरुषको ज्यान गयो